मर्न लागेको माटो बचाआ – कृषक र प्रविधि
खेती गरिने माटोको समस्या बढ्दै जानुमा एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर अम्कन मिल्दैन । यसमा कृषक, व्यवसायी लगायत राज्यका निकाय सबैको दोष उत्तिकै छ । बढी उत्पादन लिनको लागि कृषकहरुले पनि जथाभावी रसायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दा माटोको गुणस्तरमा हस आएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका माटो सम्बन्धि काम गर्ने निकायहरुले झारा टार्ने काम मात्र गरेकोले खेती गर्न शुरु गरेको देखि अहिले सम्म एक पटक पनि माटोको नमूना परीक्षण नभएको ठाँउहरु धेरै छन् । किन हाम्रा कृषकहरुलाई माटोको नियमित परीक्षण गर्नु पर्ने बारे अवगत गराउन सकिएन ? माटो परीक्षण सम्बन्धि सेवाहरुलाई गाँउ गाँउसम्म किन पु¥याउन सकिएन । उपलब्ध केही पुराना तथ्यांक र अहिलेको परीक्षणको नतिजा केलाउदा सतप्रतिशत माटो अम्लीय भएको स्पष्टसँग बुझन सकिन्छ । जति मल राख्दा पनि बोट विरुवा नसप्रिएको, उत्पादकत्व घट्दै गएको भन्ने गुनासाहरु सबैतिरबाट आइरहेको छ । यताका पूर्वाधार, वैज्ञानिक र विज्ञहरु हुदाँ हुदैँ पनि किन यस्तो अवस्था आयो ? के गुणस्तरीय माटो बिना उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सम्भव होला ? उर्वर माटो बिना कृषिबाट समृद्धि प्राप्त होला ? हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकौला ? छ भने के कसरी हो सैबेलाई यो सम्बन्धि जानकारी गराउनु प¥यो होइन भने विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै तुरुन्त माटोको गुणस्तर बृद्धिका लागि अभियान नै चलाउनु प¥यो । के ले रोकेको छ यो सब गर्नलाई ? तीन तहका सरकारको कृषि हेर्ने निकायले यसको आवश्यक्ता महष्ुास गर्ने हो भने यो कार्य असम्भव होइन । अझ ढिला भइसकेको छैन यसमा अब काम शुरु गर्ने हो भने पनि राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ ।
संघ र प्रदेशले बजेट विनियोजन गरिसकेको र स्थानीय तहमा पनि युद्धस्तरमा बजेट तयारी हुदैँ गरेकोले माटोमा आईरहेको गम्भीर समस्यहरुको दिगो समाधान गर्न सबै स्थानीय तहहरुले आवश्यक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु ।